Kooxda Manchester United oo guul darro kala kulantay kooxda Brighton - Halbeeg News
Kooxda Manchester United oo guul darro kala kulantay kooxda Brighton
Kooxda Manchester United ayaa kulankoodii labaad ee ay ka ciyaareen horyaalka Premier League xili ciyaareedkan cusub waxay guuldaro kasoo gaartay kooxda Brighton oo 3 gool iyo laba gool kaga adkaatay kooxda Manchester United.
Manchester United ayaa kulankii 1aad ee ciyaaraha Premier League waxa ay 2 iyo gool kaga adkaadeen kooxda Leicter City.
Ciyaariyahan Paul Pogba ayaa ciyaarta kadib sheegay inuu naftiisa ku eedeeyanayo inay la kulmaan guuldaradan xanuunka badan.
“Waxaan ku ciyaarnay garoonkeena isbuucii lasoo dhaafay, balse kulankan waa mid ka duwan, waan ogahay inaadan si wanaagsan u ciyaari Karin xili kasta, dhaqankeena ayaa ah inaan fiicnaano xili kasta, waana taas waxa kulankan inaga maqnaa”.
Jamaahiirta England ayaa bilaabay inay eedeyn dusha ka saaraan tababaraha Manchester United ee Jose Mourinho, kadib guuladaradii xalay.
Manchester United uu hogaaminayay Jose Mourinho ayaa si aan wanaagsaneyn ku soo qaadatay kulamadii diyaar garowga ee xili ciyaareedka cusub, taasoo aan wali waxba iska badalin Red Devils bilawga horyaalka Premier League.
Kenya oo diyaarineysa xeer ilaaliya xogta macaamiisha isticmaasha internet-ka
Madaxweynaha Puntland oo kala diray golaha deegaanka Badhan